Somalia:Kooxo Burcad Badeed ah oo ku dagaalamay Koonfurta Gaalkacyo - Wargane News
Home Somali News Somalia:Kooxo Burcad Badeed ah oo ku dagaalamay Koonfurta Gaalkacyo
Kooxo Burcad Badeed ah ayaa xili dambe ku dagaalamay xaafada Wadajir ee Koonfurta Gaalkacyo ee Maamulka Galmudug, waxaana la xaqiijiyey in dagaalkaa uu ku dhintay mid ka mida Burcada halka uu ku dhaawacmay mid kale.
Dagaalkan oo socday daqaiiqado kooban ayaa waxaa la sheegay in ay soo kala dhex galeen ciidamada maamulka Galmudug, waxayna ciidanku qabteen ilaa saddex ka midda Burcad badeedii sida ay saraakiisha ciidanku sheegeen.
Dadka Xaafada uu dagaalka ka dhacay ayaa sheegay in Burcadan ay ku wada noolaayeen hal Guri ayna garanayn sababta dagaalka keenay walow ay sheegeen in ay is ka hor imaadkan oo kale ay sabab u tahay ismaandhaaf dhaqaale oo soo kala dhexgala.
Haraaga kooxahii Burcad badeeeda ayaa qaybo ka mid ah waxa ay ku sugan yihiin Koonfurt Gaalkacyo iyagoo mararka qaar ay dagaalo sidan oo kale dhexmaro.
Italy:1,500 qof oo laga badbaadiyay Mediterranean